Allaha u Naxriisto Maalin kasta, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Markaan xafiiska aado ama aan la kulmo dadka ganacsatada ah, waxaan xidhaa wax gaar ah. Maalmaha markaan guriga joogo, waxaan xidhaa dhar maalin kasta. Waan hubaa inaad sidoo kale haysatid - qaar ka mid ah jiinisyo labisan dharka gashaday ama funaanado xidhan.
Markaad ka fekereyso sharafta Ilaah, miyaad ka fekereysaa dhar gaar ah ama in ka badan dharka maalin kasta? Haddii ixtiraam isaga waa wax aan sameeyno waqtiga oo dhan, waa inaan ku fikirnaa qaab maalmeedka.
Ka fikir howlaha ka soo baxa maalin caadi ah: wadista shaqada, tagista iskuulka ama dukaanka cuntada, nadiifinta guriga, goynta cawska, ka qaadista qashinka, hubinta emaylkaaga. Waxyaabahanas midkoodna waa kuwo aan caadi ahayn, oo badidoodu uma baahna dhar qurux badan. Markay tahay sharfida Ilaah, ma jiro muuqaal sida, "funaanad, kabo ama kabo, adeeg maleh." Wuxuu aqbalaa sharaftayada 'sal u noqo sidaad tahay'.
Waxaan ku sharfi karaa Ilaah siyaabo dhowr ah, waxaanan sidoo kale ogaaday in markaan si taxaddar leh isku dayo inaan isaga sharfo, aan aad ugu qanco. Halkan waxaa ku yaal tusaalooyin noloshayda: Qaado waqti aad ku xaqiijiso xukunkaaga aniga iga sarreeya oo dadka kale u ducee. In dadka kale laga eego aragtida Ilaah oo loola dhaqmo si ku habboon.
In aan guto waajibaadka ka saaran qoyskayga iyo gurigaba. Cunista waxa saxda ah, jimicsi iyo hurdo kugu filan (jidhkaygu waa macbudka Ruuxa Quduuska ah). La socoshada dhibaatooyinka aan qabo iyo u beddelkeyga xagga Ilaah oo aan ka sugayo natiijada isaga xaggiisa. Si aan ugu adeegsado hadiyadihii uu igu siiyay ujeedkiisa.
Ma maalin walba Ilaah baad u sharraxdaa? Mise waa wax aad keydiso waqtiyada aad "labbisto"? Miyay dhacdaa oo keliya markaad kaniisad aado?
Haddii aadan ka imaan "Ku-dhaqanka Jiritaanka Ilaah," ("Ku tababarashada jiritaanka Ilaah,") oo maqlay ama akhristay, aad baan kugula talin lahaa adiga. Walaalkiis Lawrence wuxuu ahaa nin daanyeero ah oo noolaa qarnigii 17aad oo bartay micnaha ay tahay in lagu sharfo Ilaah waxyaalaha caadiga ah ee nolol maalmeedka. Waqti badan ayuu ku shaqeeyay jikada guriga kayga. Halkaas ayuu ka helay farxad weyn iyo dhammaystir tusaale wanaagsan marka aan ka murugoodo karinta ama nadiifinta saxamada!
Waan jeclahay salaadda uu tukaday kahor intuusan bilaabin shaqadiisa: "Ilaahayow, maadaama aad ila joogto oo ay tahay inaan hadda u hogaansamo wixii aad ku amartay - dareenkaaga u jeedi shaqadan banaanka ah. Si ay nimcadu ii siiso inay hortayda kugu sii jiraan, Oo fikirkaygu ha ku fikiro, Shuqulkayguna hortayduu ku fiicnaan doonaa, Oo wax kasta oo adiga iyo jacaylka ku jiraba waan kuu dhigayaa.
Wuxuu ka yidhi shaqadiisa jikada: "Aniga ahaan, saacadahaan shaqadu kama duwana xilliyada tukashada. Sanqadha iyo buuqa jikadayda, halka dhowr qof ay leeyihiin hamooyin kala duwan, waxaan ku raaxeysanayaa Ilaah si nabad ah sida markii aan ku sujuuday meesha allabariga, diyaarna u ah karaamadan. in la qaato. "
Aynu ku dhaqanno jiritaanka Ilaah, wax alla wixii aan qabanno, oo aan isaga ku sharfinno wax kasta oo maalin walba jira. Xitaa inta aan nadiifinno oo kala saarno suxuunta.